zvakajeka kavha, akajeka mapurasitiki kavha, akajeka mapurasitiki bhokisi, mabhokisi chikweshe
HLP Klearfold ndiyo nyika guru Mugadziri epurasitiki mabhokisi zvakajeka , munhu kutungamirira Mupi tsika thermoforming uye zvakajeka epurasitiki sepombi uye vaitenderera , uye yokuvaka kuti zvakajeka kavha zvakagadzirwa zvakafanana Klearfold ® Anobvumauye Insight ® kavha mugadziriro, uye Duofold ® mubatanidzwa kavha. We kushandisa zvemberi kudhinda, Decorating, uye vachichinja ruzivo. Our proprietary Soft Crease ® scoring zvemichina chendangariro kuti Klearfold wedu ® zvakajeka epurasitiki mabhokisi akamisa nokukurumidza uye nyore zvose ruoko uye muchina-zadza mafomu.
Tinosungirwa kupa soro mitemo vatengi, tikashumira zvakajeka epurasitiki bhokisi zvinodiwa pamusika North America kwemakore anopfuura 15 adarika. Takavaka yakavimbika, zvikuru inoshanda kwezvivako, uye ruzivo rokutengesa uye kutarisirwa zvikwata North America. Tinotsigira vakazvitsaurira vashandi zvinopa 24-awa nzeve vatengi, uye tinoedza kununura: Plastic bhokisi mashoko mumaawa 24 CAD ivhu mumazuva matatu mashanu Full ruvara epurasitiki bhokisi comps mukati vhiki imwe okutambirwa mifananidzo vazvo kuNorth America muna vatanhatu kwemavhiki masere epurasitiki bhokisi mharidzo mvumo
Tiri ISO 9001 vanopupurirwa uye Sedex ® nhengo. Tinoshanda nesimba kuti vawane yose zvinodiwa zvose evanhu abvume, uye tinokurudzira vatengi kushanyira uye mabasa pachavo unhu hwavo uye munzanga abvume audits. Tiri nhengo Tsika-Trade Partnership Against Kwougandanga (C-TPAT), nokuzvidira wedzerai cheni kuchengeteka purogiramu inotungamirirwa US Customs uye Border Protection, pfungwa kuvandudza kuchengetedzwa private makambani 'zvitengeswa ngetani.